प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेको जी-न्यूजले भन्यो- भारतले सगरमाथामा आफ्नो दावा ठोक्नुपर्छ - Paschimnepal.com
प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेको जी-न्यूजले भन्यो- भारतले सगरमाथामा आफ्नो दावा ठोक्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अन्तर्वार्ता दिएको भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई भारतीय नाम दिने अभियान थालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएको अर्को दिन उक्त च्यानलले सगरमाथामा भारतीयले दावा ठोक्नु पर्ने भन्दै सामग्री प्रसारण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिने र सगरमाथामा दावा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति एकै हुन्- जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरी।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिन गत आइतबार काठमाडौं आएका चौधरीले हेलिकप्टरमा सगरमाथा आधार शिविर पुगेको बताएका छन्।
मंगलबार राति प्रशारण भएको कार्यक्रममा उनी भन्छन्- त्यहाँ उभिएर हामीले यस (सगरमाथा) को नाम परिवर्तन गर्न अभियान सुरू गरेका छौं।
उनले सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ। भारतीय गणितिज्ञ राधानाथ सिकदर सगरमाथाको उचाइ नापेकाले उनको नाममा सगरमाथाको नामाकरण हुनु पर्ने उनको तर्क छ।
‘माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्ने अभियान हामी आजबाट सुरू गर्दैछौं। हाम्रो यो यात्रा त्यही अभियानको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनी भन्छन्,’संसारलाई सगरमाथाको उचाइ पहिलोचोटि बताउने राधाकृष्ण सिकदरलाई अहिलेसम्म जस दिइएको छैन। अब भारतले आफ्नो यो दाबा ठोक्नुपर्छ।’
उनले दर्शकहरूलाई जी-न्यूजको यो अभियानमा सरिक हुन र आफ्नो तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् सगरमाथाको नाम परिवर्तनको अभियान चलाउन आह्वान गरे।
‘म तपाईंको हरेक कुरा मान्न तयार छु। के हामी यो बातचित अझै अगाडि बढाउन सक्छौं? मेरो मतलब के हामी सँगै डिनर गर्न सक्छौं?’
यान्छीको राजनीतिक तथा सामाजिक सक्रियता र उनी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुलाई पनि जी–न्यूजले चीनको षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रम प्रस्तोता भन्छन्– ‘चीनसँग ओलीका केही व्यक्तिगत फोटा र भिडिओ छन्, जसको बलमा ऊ ओलीलाई नचाइरहेको छ।’
जी–न्यूजको गलत समाचारका कारण सबै भारतीय सञ्चारमाध्यममा रोक लगाउनु अर्को गलत कदम भएको टिप्पणी पनि गरिएको थियो। एउटा भारतीय च्यानलले अमर्यादित सामग्री प्रसारण गर्नेबित्तिकै सबै बन्द गरेर हामी अनावश्यक रूपले तरंगित भएको कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका थिए। (हेर्नुहोस्: ‘जी न्युज’ले गलत गर्‍यो, सबै भारतीय समाचार च्यानल बन्द गरेर हामीले ठीक गर्‍यौं?)
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि ‘भारतीय टिभी च्यानलले नेपाल र नेपालीविरूद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेको’ भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। काउन्सिलका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भारतका केही सञ्चारमाध्यमबाट अपुष्ट, अक्षम्य र भ्रामक सामग्री प्रसारण भएकोप्रति समकक्षी ‘प्रेस काउन्सिल अफ इन्डिया’ समक्ष गम्भीर चासो राखेको बताएका थिए।
यसरी छ महिनाअघि भारतको जुन मिडियाले ‘चीनको समर्थन पाएर भारतसँग निहुँ खोजेको’ भन्दै ओलीको खेदो खनेको थियो, आज त्यही मिडियाले ओलीको भनाइ बिनासम्पादन प्रसारण गरेको छ। आफैंले रचेको मध्यावधि निर्वाचनमा जान खुट्टा उचालिरहेका ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक करिअरको यस्तो संवेदनशील घडीमा ‘राष्ट्रवादी’ अभिव्यक्ति दिने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च दिएको छ।
चौधरीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई भारतभित्र कतिपय पत्रकारले ‘हलुका’ र ‘हास्यास्पद’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। उनको भनाइ किसान भन्नेबित्तिकै खान नपाउने गरिब, निमुखा नै हुन्छन् भन्ने पुरातन मानसिकताको उपज हो भन्ने टिप्पणीकर्ताको भनाइ छ। जबकि, पञ्जाबले कृषि क्षेत्रमा गरेको प्रगतिका कारण त्यहाँका थुप्रै किसान सम्पन्न छन्। उनीहरूले आफ्ना केटाकेटीलाई राम्रो विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेका छन्। चौधरीले पञ्जाबका किसानको आर्थिक यथार्थबाट आँखा चिम्लेर मनगढन्ते टिप्पणी गरे भन्ने कतिपयको आरोप छ।
तर दुर्भाग्य, उनले त्यसैलाई छाने।सेतोपाटी बाट
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २९, २०७७ 8:34:15 AM
Prevक्षतिपूर्तीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र
Nextहिमपात भएसंगै,लिमी गाउँ पाँच महिनाका लागि बन्द